Su'aalaha la Weydiiyo - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
J: Haa, haddii macaamilku na siiyo astaantooda, waxaan ku dhejin karnaa astaamaha xirmooyinka alaabta ama ku daabici karnaa alaabooyinka gaarka ah!
Q2: Mudo intee le'eg ayaad u samaynaysaa caar cusub oo alaabada cusub ah?
J: Guud ahaan, waxaan u baahanahay 15-21 maalmood si aan u sameysano caaryo cusub, haddii ay jiraan xoogaa farqi ah, 5-7 maalmood oo dheeri ah ayaa loo baahan yahay in lagu sameeyo wax ka beddel yar.
Q3: Macaamiilku ma u baahan yahay inuu bixiyo khidmadda caaryada cusub? Immisa ayey tahay? Dib ayaan u soo laaban doonaa khidmaddan? Intee in le'eg ayey noqon doontaa?
J: Haddii macaamilku u baahan yahay inuu sameeyo caaryo cusub, haa waxay u baahan yihiin inay bixiyaan khidmadda caaryada marka hore, waxay noqon doontaa $ 2300- $ 2800. Anaguna dib ayaan u soo laaban doonnaa khidmaddan markii macaamilku afar dalab ku dhajiyo weelka 20GP.
Q5: Mudo intee le'eg ayaad cusbooneysiineysaa alaabtaada?
Q7: Maxay yihiin farqiga u dhexeeya alaabadaada asxaabtaada?
S8: Waa kuwee shaqaalahaaga R & D? Waa maxay aqoontu?
S9: Waa maxay wax soo saarkaaga fikradda R & D?
J: Fikraddeenna R & D waa mid deegaanka u habboon, dayactir hooseeya, adeegsi nolol dheer iyo tayo sare leh.
Q10: Maxay yihiin tilmaamaha farsamo ee alaabtaada? Hadday haa tahay, maxay yihiin kuwa gaarka ah?
S11: Shahaadooyin noocee ah ayaad ku gudubtay?
S12: Shahaadooyin noocee ah ayaad ku gudubtay?
S13: Macaamiilkee ayaad ku dhaaftay kormeerka warshadda?
S14: Muxuu yahay nidaamka wax iibsigaagu?
S15: Waa maxay heerka alaab-qeybiyeyaasha shirkaddaadu?
S16: Mudo intee le'eg ayaa caaryadaadu si caadi ah u shaqeysaa? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta? Maxay tahay awoodda nooc kasta oo dhimanaya?
S17: Waa maxay habka wax soo saarkaagu?
Q18: Muddo intee le'eg ayay tahay waqtiga dhalmada ee caadiga ah ee alaabtaadu?
S19: Ma haysaa tirada ugu yar ee dalab ah? Hadday sidaas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku?
S20: Waa maxay awoodaada guud?
S21: Intee ayey le'eg tahay shirkaddaadu? Waa maxay qiimaha wax soo saar sanadle ah?
S22: Waa maxay qalabka baaritaanka aad haysaa?
S23: Waa maxay nidaamkaaga tayada?
S24: Waa maxay wax soo saarkaaga? Sidee lagu gaadhay?
Q25: Muddo intee le'eg ayuu shaqeynayaa inta soo hartay ee alaabooyinka WPC?
S26: Muddo intee le'eg ayaad bixin doontaa?
S27: Isbarbar dhigga alwaaxda, maxay tahay faa iidada ay leedahay wax soo saarka WPC?
S28: Waxyaabaha WPC ma u baahan yihiin rinjiyeyn? Midabkee ayaad bixin kartaa?
Dabaqa WPC, Qurxinta WPC, alwaax decking isku dhafan, Qurxinta banaanka ee WPC, Gogosha WPC, Bannaanka WPC decking,